Wararka - Tuubada silikoonku waxay qorshaynaysaa inay kor u qaaddo qiimaheeda dhammaan badeecadaha silikooyinka
Tuubada silikoonku waxay qorshaynaysaa inay kor u qaaddo qiimaheeda dhammaan badeecadaha silikooyinka
Tuubada silikoonku waxay qorshaynaysaa inay kor u qaaddo qiimaheeda dhammaan badeecadaha silikooyinka. Qiimaha kororku wuu kala duwan yahay 10-20%.
Suuqa silicone-ka ayaa juqraafi ahaan loogu qaybiyay Waqooyiga Ameerika, Galbeedka Yurub, Aasiya-Baasifigga, Bariga Yurub, Koonfurta Ameerika iyo Bariga Dhexe & Afrika. Sanadka 2019, Aasiya Pacific waxay ahayd gobolka ugu weyn ee suuqa silikoon.
Baahida sii kordheysa ee silicone ee warshadaha kala duwan ayaa la filayaa inay kiciso suuqa silikoon. Qalabka silikooniga ayaa si aad ah loogu isticmaalaa warshadaha sida dhismaha, gaadiidka, korontada & elektaroonigga, dharka iyo daryeelka gaarka ah iyo dawooyinka. Alaabta silikooniga ah sida dhejisyada silikooniga, dhejiska iyo dahaarka ayaa leh codsiyo waaweyn xagga dhismaha. Sidoo kale, qaybta elektiroonigga, silikoon waxaa loo isticmaalaa in lagu bixiyo xasilloonida kuleylka sare iyo iska -caabbinta cimilada, ozone, qoyaanka, iyo shucaaca UV ee alaabada elektiroonigga ah.
Qiimaha sare u kaca ee alaabta ceyriinka ah ee ku daraya kharashyada wax -soo -saarka ayaa la filayaa inay xakameyso koritaanka suuqa silikoon. Helitaanka hoose ee silikoon ceeriin ah oo ka dhalatay xiritaanka tas -hiilaadka wax -soo -saarka ayaa loo arkaa inay tahay qodob muhiim ah oo saameynaya sicirka alaabta silikooniga ah. Xiritaanka tas -hiilaadka wax -soo -saarka silikoonnada ee Jarmalka, Mareykanka iyo Shiinaha sababtuna waa arrimo kala duwan oo deegaanka ah iyo siyaasadaha waara ee dowladda ayaa carqaladeeyay bixinta silikoonnada sanadihii la soo dhaafay.
Tani waxay kordhisay cadaadiska saarayaasha si kor loogu qaado sicirka alaabada silikonka.Sidaa darteed, isbeddelada sicirka alaabta ceeriin ayaa la filayaa inay carqaladeeyaan kobaca suuqa silicone.
Baahida sii kordheysa ee kiimikooyinka cagaaran ayaa horseedaysa koritaanka suuqa silikoon. Cadaadiska sii kordhaya ee isticmaalka agabyada bey'adda u wanaagsan ayaa si togan u saameynaya suuqa silikoon. Badeecadaha silikooniga ah waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwo saaxiibtinimo u leh deegaanka oo ka cimri dheer kuwa alaabada caagga ah.
Waqtiga dhejinta: May-28-2021